Wasiir Goodax oo Bahda waxbarashada kala hadlay saameynta Covid-19 ee dhinaca waxbarashada. - Latest News Updates
Wasiir Goodax oo Bahda waxbarashada kala hadlay saameynta Covid-19 ee dhinaca waxbarashada.
Muqdisho:-Wasiirka wasaaradda waxbarashada Hiddaha & Tacliinta Sare Mudane Cabdullaahi Goodax Barre.Ayaa habka adeegga casriga ah ee Internet (Zoom) kulan kula qaatay masuuliyiinta Dalladaha Waxbarashada Dalka.
Wasaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee dalka ayaa hore u fartay in la xero dhamaan goobaha waxbarshada dalka si looga digtoonaado Qatarta caabuqa Covid-19 ee kusii faafaya waxaana waxan sidoo kale ay dib u dhigtay Imtixaanaadkii dugsiyasa sare ee dalka
Previous articleCiidamada Dowladda oo soo saaray Miino lagu aasay inta u dhaxeeysa Oowdheegle iyo KM-50.
Next articleGuddoomaha Gobolka oo xalay kormeer ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka G/Banaadir+Sawirro